Socialism (3) | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
← Socialism (2)
Election Laws →
ဝီလျံ သွန်ပဆင် (William Thompsom 1785-1833)
ဝါဒလိုရင်းအနှစ်ချုပ် – ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ရေးအတွက် အလုပ်သမားက ပေးရသော လုပ်အားကို အထူးဖော်ပြသည်။ လုပ်အားသည်သာ တန်ဖိုး၏ ရေသောက်မြစ်။ အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားကြောင်း ပေါ်ထွက်လာသည့် အစွန်းထွက် တန်ဖိုးကို အရင်းရှင်တို့က ဝါးမြိုလိုက်ခြင်းကို ကန့်ကွက်သည်။
ဂျွန်ဂရေး (John Gray 1799-1850)
ဝါဒလိုရင်းအနှစ်ချုပ် – ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို လူအများက ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်၍သာရသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများသည် လုပ်ခပိုရရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အရင်းရှင်စနစ်၏ ဘောင်အတွင်းမှနေ၍ တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်နေရရုံမျှနှင့် ပြီးမြောက်မည်မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်မှသာ အကျိုးခံစားရမည်ဟု ယုံကြည်သည်။
ဆိုရှယ်လစ် ၅ မျိုး
သမဝါယမ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ (Co-operative Socialism)
အကျဉ်းချုံး၍ ထပ်ခွဲလျှင် –
အစိုးရဦးစီးသော ဆိုရှယ်လစ်စနစ် – (၁) ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ဝါဒ၊ (၂) ကွန်မြူနစ်ဝါဒ
အစိုးရဦးစီးမှု မပါသော ဆိုရှယ်လစ်စနစ် – (၁) အစိုးရမဲ့ဝါဒ၊ (၂) အလုပ်သမား သမဂ္ဂဝါဒ၊ (၃) အလုပ်သမား သမဂ္ဂဝါဒ။
ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို မာ့က်စ်ဝါဒဟုလည်းခေါ်သည်။ ကားလ်မာ့က်စ် (Karl Marx 1818-1883)။ မာ့က်စ်ဝါဒ၏ ရေသောက်မြစ်သုံးရပ်မှာ (၁) ဂျာမန်ဖီလိုဆိုဖီ၊ (၂) အင်္ဂလိပ် နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ၊ (၃) ပြင်သစ်တို့၏ ဆိုရှယ်လစ်အယူအဆ။
ဂျာမန်ဖီလိုဆိုဖီ – ဟေဂယ်လ် (Friedrich Hegel) နှင့် ဖွိုင်ယဲရ်ဘာ့ဟ် (Ludwing Feuerbach) တို့၏ အတွေးအခေါ်ကို ယူသည်။ မာ့က်စ်က ဟေဂယ်လ်၏ ဒွန္ဒသဘောတရား (Dialectica) ကို ခံယူသည်။ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်ပွား၍ ပြောင်းလဲ တိုးတက်သည် (The Concept of Contradiction) ဟူသော အယူအဆကို ခံယူသည်။ သို့သော် ဝိညာဉ်တော်ဝါဒ (Absolute World-spirit) ကို စွန့်ပယ်သည်။ ဖွိုင်းယဲဘာ့ဟ်ထံမှ ရုပ်ဝါဒ (Materialism) နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆကို မာ့က်စ်က ခံယူသည်။ သို့သော် သမိုင်းအမြင်ကိုမူ ပယ်သည်။
အင်္ဂလိပ်ရေသောက်မြစ် – အဒမ်စမစ် (Adamsmith 1723-1790) နှင့် ဒေးဗစ်ရီကာဒို (Davidrecardo 1772-1823)။ မာ့က်စ်က စမစ်နှင့် ရီကာဒိုတို့၏ အလုပ်နှင့် တန်ဖိုးသဘောတရားကို လေ့လာပြီးနောက် အရင်းရှင်စနစ်၏ အစွန်းထွက်တန်ဖိုးသဘောတရားကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် စမစ်နှင့် ရီကာဒိုတို့၏ သမိုင်းအမြင်ကို ဆန့်ကျင်သည်။
ပြင်သစ်ရေသောက်မြစ် – စိန့်ဆီမွန် (Claude Henri Simon 176-1825) နှင့် ရှားလ်ဖူရီယေ (Charles Fourier 1772-1837)။ ထိုနှစ်ဦး၏ အယူအဆများအနက် ဆိုရှစ်လစ် (ဝါ) ကွန်မြူနစ်အယူအဆများထဲမှ ဆိုရှယ်လစ်အတွေးအခေါ်နှင့် အစီအမံများကို ခံယူခဲ့သည်။
4 responses to “Socialism (3)”
I would like to say thanks you for this post, particularly for the5types of socialism and socialism with or without government.
However, what I would like to clarify my previous knowledge about the difference between the socialism and communism. I thought that socialism is just the economic system which is the mean or approach to be used in order to attain the final goal, the society with communist system which is in effect the political system. Your feedback for my comment is most welcome.
စာေၾကြးလာရွင္ပါတယ္ ကိုသကၤာမကင္း ခင္ဗ်ားးးး